Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika kumatare edzimhosva panyaya yeMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, zvinhu zvinofanirwa kugarirwa pasi potsvagwa nzira dzekugadzirisa zvinenge zvichinetsa pasina kuenda kumatare aya.
Nyanzvi idzi dzinoti zviri pachena kuti MDC yaVaChamisa iri kutambisa nguva nekuenda kumatare nenyaya dziri pachena kuti inonokundikana, nokudaro VaChamisa vanofanirwa kudzokera kuvanhu vakavasarudza vopihwa gwara rekutora, kwete ivo kuita zvemusoro wavo.
Nelson Chamisa MDC Alliance Zimbabwe Elections Photo Gallery
Vachitaura zuva rimwe mushure memutongo wakaturwa nemutongi wedare repamusoro muHarare, VaTawanda Chitapi, mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti VaChamisa vanofanirwa kudzokera kuvanhu vogara pasi vachitsvaga nzira dzinoita kuti bato ravo risapote vachidzokera kumatare.
VaMavhinga vanoti zvinenge zvakanaka kuti vari kukakavadzana ava muMDC vagarisane pasi votaurirana kuitira kuti zvinhu zvigadziriswe.
Asi VaMavhinga vanoti semaonero avo, pasvika zvinhu pakati paVaChamisa naMuzvare Thokozani Khupe, nevamwe vavo vanoti VaDouglas Mwonzora, VaMorgen Komichi naVaElias Mudzuri, ndepekuti muchato uchibvarurwe zvawo zvachose.
VaMavhinga vanoti veruzhinji vari kuda kuona kuti VaChamisa vachaenda here kukongiresi ichadaidzirwa naMuzvare Khupe kana kuti vachangoenderera mberi vachidhonza nekwavo kana kutobuda nebato idzva risineyi nezita rekuti MDC.
Vachipa mutongo wavo neChishanu, VaChatapi vakarasa nyaya yakapinzwa mudare naVaCharlton Hwende nevamwe vavo vachiti MDC Alliance harisi bato ringamiswa mudare sezvo risina kugadzwa zviri pamutemo.
VaHwende nevamwe vavo vaida kuti dare rimise Muzvare Khupe kudzinga nhengo dzeMDC Alliance muparamende - izvo zvakaramba kutambirwa naVaChitapi vachiti MDC Alliance harisi bato riri pamutemo.
Vachitaura mushure memutongo waVaChitapi, munyori mukuru weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, vakaudza Studio7 kuti chinangwa chavo hachisi chekudzinga nhengo muparamende, asi kuti vanozotora matanho aya kunhengo dzinenge dzatyora mitemo yebato.
Asi mutauriri mutsva weMDC yaVaChamisa, Muzvare Fadzai Mahere, vakaudzawo Studio7 kuti "simba rehove riri mumvura" nokudaro vachadzokera kuvanhu kunopihwa gwara rekutora.
Kudzokera kuvanhu ndiko kuri kukurudzirwa naVaMavhinga senzira yekupedza bopoto ranetsa muMDC kwemakore maviri kubva zvakashaya mutungamiri webato iri wekutanga, VaMorgan Tsvangirai, muna Kukadzi 2018.